Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 94
Nepali New Revised Version, Psalms 94
1 हे परमप्रभु, प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्‍वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्‍वर, आफ्‍नो ज्‍योति प्रदर्शित गर्नुहोस्‌।
2 हे पृथ्‍वीका न्‍यायाधीश, उठ्‌नुहोस्‌, अहङ्कारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्‌।
3 हे परमप्रभु, दुष्‍टहरू कहिलेसम्‍म रमाउने, कहिलेसम्‍म दुष्‍टहरू उल्‍लसित हुने?
4 तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्‌, सबै कुकर्मीहरू अहङ्कारले भरिएका छन्‌।
5 हे परमप्रभु, तिनीहरूले तपाईंका प्रजालाई मिच्‍दछन्‌, र तपाईंको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्‌।
6 तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्‍या गर्दछन्‌, र अनाथहरूलाई मार्दछन्‌।
7 तिनीहरू भन्‍छन्‌, “परमप्रभुले देख्‍नुहुन्‍न, याकूबका परमेश्‍वरले वास्‍ता गर्नुहुन्‍न।”
8 मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर, ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान्‌ हुने?
9 जसले कान दिनुभयो, के उहाँ सुन्‍नुहुन्‍न र? जसले आँखा सृजनुभयो, उहाँले देख्‍नुहुन्‍न र?
10 जसले जाति-जातिलाई ताड़ना दिनुहुन्‍छ, के उहाँले दण्‍ड दिनुहुन्‍न र? मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्‍छ र?
11 परमप्रभुले मानिसका विचारहरू जान्‍नुहुन्‍छ, तिनीहरू त निरर्थक हुन्‌ भनी उहाँ जान्‍नुहुन्‍छ।
12 हे परमप्रभु, त्‍यो मानिस धन्‍यको हो, जसलाई तपाईंले ताड़ना दिनुहुन्‍छ, र आफ्‍नो व्‍यवस्‍थाबाट सिकाउनुहुन्‍छ।
13 त्‍यसलाई दु:खको दिनमा तबसम्‍म चैन दिनुहुन्‍छ, जबसम्‍म दुष्‍टहरूका निम्‍ति खाड़ल खनिँदैन।
14 किनकि परमप्रभुले आफ्‍नो प्रजालाई फ्‍याँक्‍नुहुन्‍न, उहाँले आफ्‍नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्‍याग्‍नुहुनेछैन।
15 इन्‍साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ, र सबै सोझो मन भएकाहरू त्‍यसको पछि लाग्‍नेछन्‌।
16 दुष्‍टहरूका विरुद्धमा मसँग को खड़ा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्‌नेछ?
17 परमप्रभु मेरा सहायक नहुनुहुँदो हो त, मेरो प्राण अघि नै मृत्‍युको शून्‍यतामा वास गरिसक्‍नेथियो।
18 “मेरो खुट्टा चिप्‍लिरहेछ” भनी जब मैले भनें, तब तपाईंको प्रेमले मलाई थाम्‍यो, हे परमप्रभु।
19 जब मेरो मनमा ज्‍यादा फिक्री भयो, तपाईंको सान्‍त्‍वनाले मेरो प्राणलाई आनन्‍दित तुल्‍यायो।
20 के दुष्‍ट शासकहरू तपाईंसँग मिल्‍न सक्‍छन्‌, जसले आफ्‍ना ऐनद्वारा विपद्‌ ल्‍याउँछन्‌?
21 तिनीहरू धर्मीहरूका विरुद्धमा गठबन्‍धन गर्छन्‌, र निर्दोषलाई मृत्‍युदण्‍ड दिन्‍छन्‌।
22 तर परमप्रभु मेरो गढ़ हुनुभएको छ, र मेरा परमेश्‍वर मेरो शरणस्‍थानको चट्टान हुनुभएको छ।
23 उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खन्‍याइदिनुहुनेछ, र तिनीहरूका दुष्‍टताको निम्‍ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ, परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्‍छ।
Psalms 93 Choose Book & Chapter Psalms 95